Rorjọ na Oslo: Mmadụ ise merụrụ ahụ dị ka nwoke eji egbe ụgbọ ebule zuru ezu ndị na-eguzo
Pịa ebe a iji tinye
Andrew J Wood, Onye isi ala SKAL Asia
Apolónia Rodrigues, Ọchịchịrị Sky, Portugal
Nwere ike 19, 2022
Na-agbasa News Travel
October 22, 2019 0 1 min gụọ
Oslo ndị uwe ojii gbagburu ma nwude otu nwoke ji egbe zuru ụgbọ ihe mberede ma jiri ya mee ndị ebule na-emeghị ihe ọjọọ ka ọ na-aga mwakpo na isi obodo Norway n'ehihie Tuesday.
E jidere onye a na-enyo enyo agha mana ọ merụghị ahụ nke ukwuu, n'agbanyeghị na ndị uwe ojii kwuru na ha meghere egbe ụgbọ ala ahụ mgbe ha na-achụ.
Mmadụ ise merụrụ ahụ na ihe ahụ, gụnyere ụmụ abụọ, mana ọnọdụ ha kwenyesiri ike na obere obere ha merụrụ ahụ.
Ihe onyonyo ndị akaebe si ebe ahụ weghara oge ndị uwe ojii ji ụgbọ ihe mberede gbaa gburugburu mana onye ahụ na-enyo enyo jisiri ike zere ha wee pụọ n'agbanyeghị agbanyeghị ọkụ.
“Babiesmụaka abụọ merụrụ ahụ mgbe ụgbọ ihe mberede ahụ ụgbọelu ahụ tọọrọ dakwasịrị otu ezinụlọ. Ha bụ ejima, ọnwa asaa, a na-agwọ ha, ”onye na-ekwuchitere ụlọ ọgwụ Mahadum Oslo Anders Bayer kwuru.
E zuru ụgbọ ihe mberede ahụ n'ihe dịka 12:30 oge mpaghara mgbe ọ zaghachisịrị ihe mberede okporo ụzọ. Dabere na Bayer, mwakpo ahụ were ihe dị ka nkeji iri anọ na ise n'otu oge ọzọ ụlọ ọgwụ nke ụlọ ọgwụ ahụ jisiri ike dọpụ ụgbọ ahụ ezuru ezu ya ogologo oge maka ndị uwe ojii ijide ya.
“Minit ole na ole ka e mesịrị, otu n’ime ndị ọzọ na-ahụ maka ụgbọ ihe mberede jisiri ike kwụsị ụgbọala ahụ e zuru ezu ka ọ daba n’ime ya. Mgbe ahụ ndị uwe ojii bịara mgbe okuku ahụ nwetachara ya, ”ka o kwuru.
Ndị uwe ojii eguzobelarị ihe nchebe gburugburu ebe a na-achọ imepe ebumnobi maka ihe a. Ekwuru na ụgbọ ala mberede a zuru na mpaghara Torshov nke isi obodo.
A na-ahụ ebe a na-ahụ ihe ndị ọzọ n'okporo ámá ndị dị na Oslo ka ọ na-adaba na mpaghara na mpaghara ndị agbata obi.
Ndị uwe ojii mechara kwuo na ọ na-achọ nwanyị metụtara ihe mberede okporo ụzọ nke mere n'oge izu ụgbọ mberede na ịchụso.
“Otu nwoke ji egbe zuru ụgbọ ihe mberede, jiri ụgbọala gaa gbuo ụfọdụ ndị. Anyị nwetara ya ugbu a, ”ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii kwuru, n'agbanyeghị na ha jụrụ ikwu mmadụ ole merụrụ ahụ site n'ụgbọ ihe mberede ezuru ma ọ bụ ma onye ọ bụla nwụrụ n'ihe ahụ.
"Onweghị ihe ọ bụla gosiri na ihe a merenụ metụtara iyi ọha egwu," onye ndu ndị uwe ojii Oslo bụ Erik Hestvik gwara ndị nta akụkọ.
Ọzọ na: Oslo
Onye nchịkọta akụkọ ọrụ bụ Oleg Siziakov
Hotels & Ebe ntụrụndụ
Wharf Hotels kpọrọ onye isi ala ọhụrụ
Mmanya & mmuo
Site na ndị ọrụ ugbo ruo ndị na-eme ngagharị iwe ruo ndị na-eme mmanya
Ozi ngwa ngwa
Kedu ihe na-atụ ndị njem America n'oge okpomọkụ a?
Viking na-ebufe ụgbọ mmiri kacha ọhụrụ
Onye isi ala United Arab Emirates na Emir nke Abu Dhabi anwụọ
Jamaica na-anabata "Ndị Caribbean na-ekpo ọkụ"
Four Seasons Hotel Westlake Village tụgharịrị gaa na ahụike & ọdịmma
TripAdvisor na-ekewa Ogige Resident Covent
Owuwu Alaeze Ukwu na-asọpụrụ The Notorious BIG's 50th ụbọchị ọmụmụ
Okwu CEO Schulte maka Fraport AGM Ebipụtara n'ihu
Zute ndị isi ụlọ ọrụ PATA ọhụrụ
Okpomọkụ anwụ nwere ike ịkpata uzuzu uzuzu na Mars
Ndị na-ahụ maka anụ ọhịa Uganda toro n'ahịrị afọ 7 maka ịzụ ahịa anụ ọhịa
Kedu ebe njem US na-enye nnukwu ego maka ego gị na 2022?
Ndị nnọchi anya Bahamas na ndị ọrụ njem nlegharị anya kacha elu na Mexico zutere
Previous Hotels nke World Leading họpụtara Onye isi ala ọhụrụ na onye isi ọrụ
Osote Etihad Airways na Saudia na-ekwuputa ụzọ ụzọ codeshare ọhụrụ 12
Izu ụka a bụ maka Udo Site na njem nlegharị anya
Ista, Ngabiga, Ramadan na Songkran pụtara Udo Site na njem nlegharị anya n'izu ụka a. Na ụwa na-eche agha ihu, Dr. Peter Tarlow na-akọwa njikọ dị n'etiti oge ezumike a na udo site na njem nlegharị anya. Dr. Tarlow bụkwa Chaplin maka ngalaba ndị uwe ojii ọdụ kọleji na Texas. Na mkparịta ụka ya na Juergen Steinmetz, a na-echetakwara anyị banyere […]
Chọọ ihe ọ bụla na eTurboNews n'okpuru